Izindaba - IHangzhou Jiande Enterprise ibuyise ngokuphuthumayo abasebenzi abangaphezulu kwekhulu
I-Hangzhou Jiande Enterprise ibize abasebenzi abangaphezu kuka-100 ngokuphuthumayo
AbakwaHangzhou Jiande Enterprise babize ngokuphuthumayo abasebenzi abangaphezu kwekhulu, baphindaphinda kathathu umholo wabo ukukhuthaza isikhathi esengeziwe sokwenza imaski!
Ngokuqhamuka kwepneumonia entsha ye-coronavirus eWuhan, ukukhiqizwa nokunikezwa kwamamaski sekuyisihloko somphakathi.
Njengebhizinisi elihola phambili ku-R & D kanye nokukhiqizwa kwemishini yokuphefumula enesabelo semakethe yasekhaya esingu-35%, i-Jiande Chaomei Daily Chemical Co., Ltd. yasabela ngokushesha emfunweni yemakethe ekhulayo evela ku-new coronavirus pneumonia epidemic futhi ngokushesha yabiza abasebenzi babuya efektri ukuhlela Ngesikhathi Sonyaka Omusha WamaShayina, kuphela uhhafu wosuku ovaliwe ngo-Eva Wonyaka Omusha, futhi sonke isikhathi siqinisekiswe ngokuphelele ngomkhiqizo.
Ekuqaleni, abasebenzi abangaphezu kuka-120 ababebuyele ekhaya bevela eholidini ngoJanuwari 18, ngemuva kokuthola isaziso sesikhathi esengeziwe, babekela eceleni umsebenzi wabo ekhaya, babuyela ngokushesha kokuthunyelwe kwabo, futhi bazinikela emsebenzini wokuqinisekisa ukutholakala kwezimaski.
Indawo yokusebenzela ibisivele igcwele, kanti abasebenzi bebehleli edeskini lokuhlinzwa betatazelela ukwenza imaski. Ngemuva kokuthi abasebenzi beqede ukufakwa kwe-ultrasonic kwemaski evikelayo, othile ngokushesha wakhipha imaski.
“Namhlanje, isiyonke isibalo sama-oda efemini sesifinyelele ngaphezu kwezigidi ezingama-80, futhi ukusebenza kwempahla kumisiwe. Ngemholo ophindwe kathathu, sizobiza bonke abasebenzi abaseduze okungathintwa nabo bese sizama konke okusemandleni ukuwuqedela. Ama-oda, intengo yangaphambilini yefekhi yamaski ihlala injalo. ” U-Lin Yanfeng, umphathi jikelele we-Party branch of North Korea kanye ne-United States buso e-Jiande City, uthe siyi-national reserve unit, futhi izintshisekelo zezwe kumele zibe phambili.
IChaomei Company yake yenza imisebenzi ebalulekile yezwe ngesikhathi seSARS, ihlinzeka ngamaski obufakazi beSARS beBeijing Xiaotangshan Hospital, iDitan Hospital, iBeijing Infectious Disease Hospital, uMnyango Wezokulawulwa Kwezinto Okujwayelekile weChinese People's Liberation Army kanye ne-Emergency Material Reserve Centre.
Ngokwemibiko, kulindeleke ukuthi kusukela ngoJanuwari 22 kuya osukwini lwesine loNyaka Omusha WamaLunar, inkampani iqinisekisa ukukhiqizwa kwamaski ama-30,000 nsuku zonke, ukukhiqizwa kwansuku zonke okungu-50 000 kusukela osukwini lwesine kuya kolwesishiyagalombili, nokukhiqizwa kwansuku zonke okungaphezu kuka-100,000 ngemuva usuku lwesishiyagalombili.